Repoblika Dominikana: ny “Dominicana Moda” Araka ny Fijerin’ireo Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2017 14:58 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, Español, Français, English
Fandikana lahatsoratra iray avy amin'ilay bilaogera Joan Guerrero ity lahatsoratra ity ary navoaka tao amin'ny bilaogy Dominikana Duarte 101 . Navoaka eto indray izany miaraka amin'ny fahazoan-dàlana avy any aminy.
Sarin'i Phoenix Diaz miaraka amin'ny lisansa Creative Commons
Mpaka sary matihanina liana tanteraka amin'ny lamaody i Anabelle Pérez. Mahazo sary amin'ny antsipirihany sy ny lafiny izay tsy azon'ny fampitam-baovao nentim-paharazana sary izy ao amin'ireo sariny miaraka amin'ny fitaovana fakantsariny. Jereo ireto sary ireto izay nosokajianay ho tena tsara.
Diana sy ny Tanàna
Matetika natokana ho an'ny fiainany manokana ny bilaogin'i Diana Suriel, saingy feno hetsika nifandray tamin'ny Dominicana Moda tamin'ity indray mitoraka ity ny fandaharam-potoanany tao amin'ny aterineto . Tsidiho izany raha toa ianao ka liana amin'ny seho iray manokana. Ireto ny heviny momba ny katalaogin'ny Carlos de Moya.
Tena olona mahafinaritra i Carlos Moya, ary miseho amin'ny alalan'ny famoronany izany. Ary nahavita mihoatra noho ny fanaony izy omaly rehefa avy nitsidika an'izao tontolo izao, ary nipetraka tety an-tany izy tamin'ny farany, …ary oay! tena tonga lafatra ny fanangonana. Mendrika isa 10 ny habetsaky ny akanjo sy ny asatanana. Tena mahafinaritra ny maodely ho an'ny fanangonana izay natao ho an'ny fararano 100 isanjato. Nanasongadina azy ny mozikan'i Vadir González: Anda Miranda, tsy mijery na aiza na aiza, ary hoy aho hoe te-hitsangana sy handihy aho. Angamba tsara ny manamarika fa ny omalin'iny ny tsingerintaona nahaterahan'i Carlito, ary ny mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahany no kadoa farany .
Ny gazety Listin Diario kosa nampiasa ny fananany mba hamoronana bilaogy manokana izay nahitana ny fitaterana feno momba ny DM08. Eto ohatra mamahanana bilaogy mivantana tamin'ny filatroana:
Nisy ny fahatarana adiny iray mahery, ary tatỳ aoriana, ny fiatoana antsasakadiny teo anelanelan'ny ny fampisehoana indroa miantoana, angamba noho ny fisoloana akanjo ho an'ireo mpilatro miisa folo izay nanao ny filatroana ho an'ilay mpamorona lamaody Dominikana . Nandritra ireo ora manaraka, namoaka sary sy fanehoan-kevitra antserasera izahay momba ny filatroana androany. Mandritra izany fotoana izany, mitohy hatrany ny fanarahana ny hetsika hatramin'ny farany. Hanomboka izao ny fetin'ny sakafo hariva, ary avy eo, hatao manodidina ny dobo filomanosana ny “Fashion Jam”.